မြို့သူမြို့သား VKONTAKTE ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို - VKONTAKTE - 2019
မြို့သူမြို့သား VKontakte ပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Excel ကိုအတွက်ဖော်မြူလာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကြေညာချက်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းဆဲလ်ချည်းနှီးသောမှန်လျှင်, ထိုသုညငွေပေးချေ၏ default အနေနဲ့လိမ့်မည်။ အပြင်ကသုညတန်ဖိုးများနှင့်အတူဤအခညျြအနှောတွေအများကြီးအထူးသဖြင့်လာသောအခါစားပွဲအလွန်လှပသောမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါအသုံးပြုသူအလားတူလယ်ပြင်မှာအားလုံးအချည်းနှီးဖြစ်မည်ဆိုပါကအခြေအနေကနှိုင်းယှဉ်ဒေတာအတွက်သွားလာရန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်တော် Excel ကိုအတွက်သုညအချက်အလက်များ၏ Display ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
Excel ကိုနည်းလမ်းများစွာအတွက်ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့သုည၏ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပေးပါသည်။ ဒီအထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးစွဲဖို့မည်ကဲ့သို့ပြု, Formatting လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြေတပြင်လုံးစာရင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များ၏ Display ကို disable လုပ်ဖို့ Option တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 1: Excel ကိုချိန်ညှိမှုများ
တကမ္ဘာလုံး, ကိစ္စကိုလက်ရှိ Excel ကိုသင်ထောက်ကူများအတွက် setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဤသူသည်သင်တို့အချည်းနှီးသော, လုံးဝသုညဆံ့သမျှသောဆဲလ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
tab ကိုစဉ်တွင် "File"အဆိုပါပုဒ်မကိုသွားပါ "န့်သတ်ချက်များ".
ပြေးသေတ္တာထဲမှာ, အပိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုအောင် "အဆင့်မြင့်"။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု setting များကိုရှာဖွေနေပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက် "လာမယ့်စာရွက်အဘို့အရွေးချယ်စရာများပြရန်"။ အမှတ်အနားမှာ check box ကို uncheck "သုညတန်ဖိုးများဆံ့ကြောင်းဆဲလ်တွေအတွက် Display ကိုသုည"။ အရေးယူအတွက်အပြောင်းအလဲ setting များကိုဆောင်ကြဉ်းရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့မေ့လျော့ကြဘူး "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
ဤအခြေလှမ်းများပြီးနောက်, null တန်ဖိုးများဆံ့ကြောင်းလက်ရှိစာရွက်သားအပေါငျးဆဲလ်အဖြစ်ကွက်လပ်ပြသလျက်ရှိသည်။
Method ကို 2: လျှောက်လွှာ၏ format
အချည်းနှီးသောဆဲလ်၏တန်ဖိုးဟာသူတို့ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲနေဖြင့်နိုင်ပါတယ် Hide ။
သငျသညျသုညတန်ဖိုးများနှင့်အတူဆဲလ်ဖုံးကွယ်လိုသည့်အတွက်အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါအပိုင်းအစပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ right-click လုပ်ပါ။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Format ကိုဆဲလ် ... ".
window ကိုပုံစံချဖြန့်ချိသည်။ အဆိုပါ tab ကို Moving "နံပါတ်"။ ကိန်းဂဏန်းတွေကို formats Switch အနေအထားသတ်မှတ်ရပါမည် "အားလုံး Formats"။ လယ်ပြင်၌လက်ျာ pane ထဲကကို "အမျိုးအစား" ကျနော်တို့ကအောက်ပါစကားရပ်ရိုက်ထည့်ပါ:
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်ပုံစံစားပွဲ
Method ကို 3: ခြွင်းချက်ပုံစံချပေး
အပိုသုညဖယ်ရှားပစ်ရန်လည်းထိုကဲ့သို့သောခြွင်းချက်ပုံစံချပေးကဲ့သို့သောအင်အားကြီး tool ကိုသုံးနိုင်သည်။
သုညတန်ဖိုးများပါဝင်နိုင်သောအကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ။ tab ကိုစဉ်တွင် "အိမ်", ထိုဖဲကြိုးအပေါ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြေအနေကတော့ဖောမတ်ချ"ယင်းက Settings အပိုင်းများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်ဟာ "Styles"။ မီနူးထဲမှာ, မှတဆင့်လမ်းညွှန် "ဆဲလ်ရွေးချယ်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို" နှင့် "တူညီသောအခွင့်အရေး Equal".
ဒါဟာပုံစံချပေး window ကိုဖွင့်လှစ်။ လယ်ပြင်၌ "ဖြစ်သည့် Format ကိုဆဲလ်," တန်ဖိုးအား inscribe "0"။ drop-down list ထဲမှာညာဘက်လယ်ပြင်တွင်, ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စိတ်တိုင်းကျပုံစံကို ... ".
တဦးတည်းကိုပိုမို window ကိုဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ tab ကိုက Move "စာလုံး"။ drop-down list ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အရောင်"ကျွန်တော်တစ်ဦးအဖြူအရောင်ရွေးကောက်သဖြင့်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရသော "အိုကေ".
ယခင်ပုံစံချပေး box ကိုပြန်, တူညီတဲ့ button ကို click "အိုကေ".
ယင်း၏ font ကိုအရောင်များကိုနောက်ခံအရောင်နှင့်အတူပေါင်းစည်းအဖြစ်အခုတော့ဆဲလ်အတွက်တန်ဖိုးသုညဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပေးကအသုံးပြုသူမှမမြင်ရတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် conditional ဖောမတ်ချ
Method ကို 4: function ကိုလျှောက်လွှာ IF
အဆိုပါတွက်ချက်မှုရလဒ်တွေကို output ကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သော Zero ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်ရသောအကွာအဝေး၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်ရွေးချယ်ပါ။ အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Insert ရာထူးအမည်".
စတင် function ကို Wizard ကို။ အော်ပရေတာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကတင်သွင်းသည့်စာရင်းထဲတွင်ရှာဖွေမှု "IF"။ ကမီးမောင်းထိုးပြနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ပြတင်းပေါက်အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများမြှင့်လုပ်ဆောင်။ လယ်ပြင်၌ "Boolean" ကျနော်တို့ပစ်မှတ်ကလာပ်စည်းတွက်ချက်သောပုံသေနည်းရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါဟာနောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌ဤပုံသေနည်းများ၏တွက်ချက်မှု၏ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်သုညပေးနိုင်ပါသည်။ အသီးအသီးအမှုအဘို့, ဤအသုံးအနှုနျးကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ တူညီသောလယ်ပြင်၌ဤပုံသေနည်းစကားရပ် appends ကိုချက်ချင်းပြီးနောက် "=0" အဆိုပါကိုးကားခြင်းမရှိဘဲ။ လယ်ပြင်၌ "စစ်မှန်သောလျှင် Value ကို" ကျနော်တို့ကအာကာသထား - " "။ လယ်ပြင်၌ "မုသာလျှင်အဓိပ်ပာယျ" နောက်တဖန်ကျနော်တို့ကဖော်မြူလာပြန်လုပ်ပေမယ့်စကားရပ်မပါဘဲ "=0"။ ဒေတာထဲသို့ဝင်သည်ကိုတပြိုင်နက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
သို့သော်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီအခွအေနေကိုသာအကွာအဝေးအတွက်တစ်ခုတည်းဆဲလ်သက်ဆိုင်အဖြစ်။ ယင်းပုံသေနည်းကူးယူနှင့်အခြားဒြပ်စင်ဖို့ရန်, ဆဲလ်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ဖို့ cursor ထားကြ၏။ လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံစံအတွက်အဆာတစ်ခု activation အမှတ်အသားရှိပါသည်။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Hold နဲ့ပြောင်းလဲခံရဖို့တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးဖြတ်ပြီး cursor ဆန့်။
အဲဒီနောကျထိုဆဲလ်ထဲမှာရှိရာရရှိလာတဲ့တွက်ချက်မှုအလွတ်ကြလိမ့်မည် "0" အစားအရေအတွက်, သုညတန်ဖိုးများကိုရလိမ့်မည်။
စကားမစပ်ပြတင်းပေါက်၏အငြင်းပွားမှုများသည်လယ်ပြင်၌နေလျှင် "စစ်မှန်သောလျှင် Value ကို" တစ်ဦး dash တည်ထောင်ရန်, ထို့နောက်တစ်ဦးသုညတန်ဖိုးဆဲလ်ထဲမှာ output ကိုရလဒ်များကိုအလွတ်များနှင့်အလွတ်မဟုတ်ဘူး။
သင်ခန်းစာ: အဆိုပါ Excel ကိုတွင် 'IF' '
Method ကို 5: application ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ECHISLO
အောက်ပါနည်းလမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ပေါင်းစပ်တစ်မျိုး IF နှင့် ECHISLO.
ယခင်သာဓက၌ရှိသကဲ့သို့, ရွေးချယ်ထားသောအကွာအဝေး၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ် အကယ်. ပြတင်းပေါက် function ကိုငြင်းခုံဖွင့်လှစ်။ လယ်ပြင်၌ "Boolean" ယင်းကမှတ်တမ်းတင် ECHISLO။ ဒီ function ဒေတာဒြပ်စင်ပြည့်စုံလျက်သို့မဟုတ်မရှိမရှိဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်ဖွင့်လှစ်ကွင်းခတ်၏တူညီသောလယ်ပြင်၌ရှိသောကြောင့်အချည်းနှီးလျှင်, ထိုသုညပစ်မှတ်ဆဲလ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောဆဲလ်၏လိပ်စာ, ရိုက်ထည့်ပါ။ ပိတ်ကွင်း။ အကြောင်း, တကယ်တော့ထဲမှာ, အော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ် ECHISLO ဒီဒေသမှာမဆိုဒေတာရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် function ကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ် "TRUE"ထို့နောက်မဟုတ်ခဲ့လျှင် - "အတုအယောငျ".
သို့သော်အောက်ပါနှစ်ခုအငြင်းပွားမှုများအော်ပရေတာများ၏တန်ဖိုးများ IF ကျနော်တို့အရပ်တို့ကိုဖလှယ်။ သောလယ်ပြင်၌ဖြစ်ပါသည် "စစ်မှန်သောလျှင် Value ကို" အဆိုပါတွက်ချက်မှုပုံသေနည်းညွှန်ပြလျက်, အတွက် "မုသာလျှင်အဓိပ်ပာယျ" ကျနော်တို့ကအာကာသထား - " ".
သင်ခန်းစာ: အဆိုပါ Excel ကိုရာထူးအမည် Wizard မှာ
ကသုည၏တန်ဖိုးရှိပါတယ်လျှင်ဆဲလ်ထဲမှာဂဏန်း "0" ကိုဖယ်ရှားမယ့်နည်းလမ်းတွေ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း, Excel setting တွင်သုည၏ display ကိုပိတ်ထားပါ။ ထိုအခါမူကား, သူတို့တစ်ခုလုံးကိုစာရွက်ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။ သင်သည်ဤအမှု၌, တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာကို disable လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာလျှောက်ထားရန်လိုလျှင်, ခြွင်းချက် Formatting, နှင့်လျှောက်လွှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပုံစံအကူအညီပ္ပံထံသို့လာကြ၏။ ရွေးချယ်ဖို့ကဤနည်းလမ်းများစွာသောတိကျသောအခြေအနေအဖြစ်အသုံးပြုသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဦးစားပေးအပျေါ၌မူတည်ပါသည်။